Grace Education - Your Trusted Education Consultant in Myanmar
West Universities & Colleges
East Universities & Colleges
Founded in May 2004, as Government registered organization. We have contributed to student’s professional and personal development and had partnership with prestigious oversea universities and institutions.
To have national and international significance.
• Encourage the students to have qualification that will have equip them with skills.
• Create student-centered service with the personal attention.
• Dedicate mutual understanding to the business partners.
GES သည် 2004 ခုနှစ်တွင်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သော organization ဖြစ်သည်။ S'pore အစိုးရကျောင်းများ ၀င်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်သော Services ပေးခြင်း၊ US Exam အတွက် Register လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့ပါသည်။
GES ၏ Service ဖြင့််S'Pore အစိုးရကျောင်းများတွင်တက်ရောက်နေသောကျောင်းသားများ ၊ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ တွင်တက် ရောက်နေသောကျောင်းသားများ၊ အနောက်နိုင်ငံရှိ US/UK/ Australia နှင့် Canada ကျောင်းများတွင် တက် ရောက်နေသောကျောင်းသားများနည်းတူမိမိ၏ပညာရေးကိုဆက်လက်ရှာဖွေလိုသူမြန်မာကျောင်းသားများ အတွက်ကူညီရန်အသင့်ရှိပါသည်။
ကျောင်းသားများ၏မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိနေစဉ်ကာလအတွင်းဘာသာစကားလိုအပ်မှူ့အတွက်ပြင်ဆင်ရန် (English Preparation Class) များအားLevel အလိုက်သော၎င်း၊ ဘာသာရပ်ပြင်ဆင်မှု့အတွက် (Subject Preparation Class)များအားလည်းဖြည်းဆည်းပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ကျောင်းသား၏ Selection of School, School application နှင့် Visa application များကိုအစအဆုံးဝန်ဆောင်မှူပေး ခြင်းများအပြင်ကျောင်းသားများ၏ဆိုက်ရောက်နိုင်ငံများတွင်အဆောင်နှင့်နေထိုင်မှူအဆင်ပြေစေရန်ကူညီပေးပါသည်။
*Toefl (iBT/ PBT/CBT) SAT /GRE /GMAT စသော Test များအတွက် Register လုပ်ပေးခြင်း၊
* Student pass လျှောက်ပေးခြင်း။
* West Country Visa အတွက် Guide Line လုပ်ပေးခြင်း။ Sevis fees သွင်း ပေးခြင်း။
* S' Pore သို့ Visit လျှောက်ပေးခြင်း။
* Special Services အနေဖြင့် AMC/ USMLE အပြင် နိုင်ငံတကာရှိ ဆရာဝန်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့်သူများအတွက်
စင်္ကာပူရှိနေရာထိုင်ခင်းအတွက် gracesvc.com တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Mighty Grace Co.Ltd.
• British Academic Excellence
• Edexcel GCE 'O' Level
• Edexcel GCE 'A' Level
• Pre-Medical GCE 'A' Level
No.458/460, Rm 7A, 7th Floor, Ya Thar Condo, Corner of 31 St & Mahar Bandoola Rd, Middle Block,
Pabedan Tsp, Yangon, Myanmar.
Tel : +95-978-51-40802,
HP : +95-951-40802
E-mail : gracesvc@gmail.com
Copyright © 2017 gracesvc.com. All Rights Reserved.